पहिलो चरणको चुनावमा नै क्रिया बस्या जस्तो १२ दिनलाग्ने भएपछि बाँकीअन्यप्रदेशमाहुने दोस्रो चरणको चुनावकहिलो पो हुने होला? एक त उम्मेदवार चामलभन्दा बढी ककँड जस्ता देखिएका छन् दाँत र आँखामाभिज्ने । त्यसमाथि यो प्रचण्ड गर्मीमा घण्टौं लाइनमा बसेर अरुलाई चुन्नआफ्नो भविष्यमाचुनालगाउनु पर्ने कत्रो सकस छ मतदातामा । तर पनि राष्ट्रिय त्यौहार जस्तै चुनावमाखुशीखुशी परिक्षार्थी जस्तो सामेल भएर पनि परिणामका लागिभने लामो समयको प्रतीक्षाले व्यग्र बनाएको छ । खानापकाउन बेर नलागेपनिपस्किन र बाँडिचुँडी गर्नलाई समय लागेको देख्दाभान्से र अन्यकामदारहरुको नियतमा नै शँकाउत्पन्नहुनथालेको छ ।
बिहागर्नु भन्दादाइजो पुर्याउन र हनिमूनमनाउनगार्हो ।श्राद्ध गर्नु भन्दासिधा पण्डित कहाँपुर्याउने झण्झट भन्दापनि बढी भएछ निर्वाचनमा मतगणना गर्न । बिचरा निर्वाचनआयोगकाकर्मचारीहरुलाई भ्याइनभ्याइ छ । यिनीहरु तीनदिनचले अढाइ कोसको गतिमा मतगणना गर्दैछन् । २० वर्षदेखि स्थानीयतहनिष्क्रियथियो अनिनिर्वाचनआयोगलाई पनिहाईसञ्चो भाको थियो ।
अब २० वर्षपछि कुम्भकर्ण जस्तो सुतेको निर्वाचनआयोग जुर्मुराउनसम्मजुर्मुराएर त उठ्यो तर अल्छि पाराले हाईहाईगर्दै कछुवा गतिले कामगर्दैछ । देश र जनतालाई स्थानीयतहको चुनावमहाकुम्भको मेला जस्तो भाछ तर बिचरो निर्वाचनआयोग नुनबारेर कोरामा बसेको शोक सन्तप्तक्रियापुत्री जस्तो देखिएको छ ।
अकवरको पालामावीरवलको को खिचडी पनि केहीदिनमाजसोतसो पाकेको थियो होला । तर प्रचण्डको पालामानिर्वाचनआयोगको मतगणना नामको खिचडी पाक्नै सकेको छैन । भोकाएकाजनतादरी बिछाएर आफ्नो थालथापेर बसिसके तर निर्वाचनको आगो दनदनीबालेर पकाएको मतगणनाको खिचडी पाक्दै पाक्दैन बा । खिचडी हो किपत्थर मतगणना हो कि संस्कृतको नबुझिने श्लोकको गिन्तिहो बुझ्नै गार्हो ।
बैशाख ३१ गते बिहा गरेकाहरु हनिमूनमनाएर फर्किउन्जेल पनि मतगणना सकिने हो कि हैन ?मधेशमाजन्तिलाई खाने र बस्ने व्यवस्था राम्रो नगर्दा ठूलै मानमर्दन गरिन्छ बेहुलीपक्षको । निर्वाचनआयोगको अहिलेको अव्यवस्था हेर्दा बिहेको जन्तिकालागि गरेको व्यवस्थाभन्दापनिखत्तम छ । स्थानीयतहको चुनावलाई कर्मचारी संगठनको चुनावभन्दापनिमामुलीबनाइएको छ ।
पहिलो चरणको चुनावमा नै क्रिया बस्या जस्तो १२ दिनलाग्ने भएपछि बाँकीअन्यप्रदेशमाहुने दोस्रो चरणको चुनावकहिलो पो हुने होला? एक त उम्मेदवार चामलभन्दा बढी ककँड जस्ता देखिएका छन् दाँत र आँखामाभिज्ने । त्यसमाथि यो प्रचण्ड गर्मीमा घण्टौं लाइनमा बसेर अरुलाई चुन्नआफ्नो भविष्यमाचुनालगाउनु पर्ने कत्रो सकस छ मतदातामा ।
तर पनि राष्ट्रिय त्यौहार जस्तै चुनावमाखुशीखुशी परिक्षार्थी जस्तो सामेल भएर पनि परिणामका लागिभने लामो समयको प्रतीक्षाले व्यग्र बनाएको छ । खानापकाउन बेर नलागेपनिपस्किन र बाँडिचुँडी गर्नलाई समय लागेको देख्दाभान्से र अन्यकामदारहरुको नियतमा नै शँकाउत्पन्नहुनथालेको छ । साढे तीनवर्षअघि भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको मतगणनामा पनियति धेरै समय लागेको थिएनजति स्थानीयनिकायको निर्वाचनको मतगणनामा लगाइँदैछ ।
के मतगणना स्थलमा लामखुट्टे धेरै भएर तिनीहरुलाई मार्दा, मार्दै आफु असक्षमभाको हो । आकाशमाभएका सबै तारा पनिगनिसकिने समय खर्चेर पनि मतगणनाको परिणाम “गइल भैंस पानीं में”े जस्तै भैरहेको छ ? के निर्वाचनआयोग जनउत्तरदायीबन्नु पर्ने हैन र ?
देशका करीब एक चौथाइ जनसंख्या वैदेशिक रोजगारमा छन् । जो देशमै छन् उनीहरुको पनि रोजगारको सुनिश्चितता छैन । सबै फुसर्दिलाभएको यो समयमा २० वर्षपछि भएको स्थानीयतहको निर्वाचनले टोल र छिमेकमा ठूलै उत्सवको माहौल सृजना गरेको छ ।
सबैलाई आफुले योग्यउम्मेदवार मतदिएकिदिइनभन्ने चिन्तनगर्नु भन्दापनिकुनदलकाकुन नेताले जिते या जित्छन् भन्नेमाउत्सुकता बढी छ । त्यसैले कोई सूर्ति मल्दै, कोही खैनीओठमा दबाउँदै, कोही गुटखाको प्याकेट खोल्दै, कोहीपानखाएर थुक्दै, कोहीसिगरेटको सर्को तान्दै, कोहीचिया, कफी, चिसो, वियर र रक्सी सुरुप्पपार्दै मतगणना स्थलतिर हेरेर बेचैन हुंदैछन् ।
किनकियिनलाई यीयावत कुरा खान र पिउनआफ्नाप्रियदल र नेताले उपलब्ध गराइदिएका छन् । अबदल र बलको हनुमानबनेपछि लँकाजलाउन या सँजिवनी बुटी लिन पहाड त चढ्नै पर्यो नि ।
जनताभन्दादलकाकार्यकर्ता बढी भएको देशमानिर्वाचनआफैमा एउटा कौतुलहो । जहाँ हरेक दलकाकार्यकर्ता र हुमानहरु दुलहीसँगलोकन्तीजान तँछाडमछाड गर्दछन् । सबैलाई आफ्ना नेताहरुका अगाडि आफुलाई योग्य सावित गरेर देखाउनु छ ।
त्यसैले सबैकाआँखा मतगणना स्थलतिर सोझिएका छन् । तर कछुवाको गतिमा अघि बढिरहेको मतगणनालाई हेरेर रिषले मुर्मुरिनेहरुले मतपत्रको साइज बिर्सेछन क्यार ?तकियाको खोल बनाउनमिल्ने साइजको लामो र चौडा मतपत्र छ ।
मतदाताभन्दाउम्मेदवारकै संख्या बढी होला जस्तो लाग्ने निर्वाचनमामत गणना गर्न बसेका गणकहरुलाई पनिकतिगार्हो भैराको होला? राजाको कामकहिले जाला घाम ? जस्तो गरेर मत गणना गरिरहेकाहरु पनिपक्कै तिनलाई सराप्दै होलान् जसले यस्तो लामो र उबाउसिनेमा जस्तो मतपत्रको डिजाइन गर्यो ।
डिजाइन गर्नेले सबैकुरा एउटै थालमाहालेर खिचडी जस्तो खानदिए ।
अहिले मतगणना गर्ने बेलामात्यो खिचडीको चामल, दाल, कनिका र नुन जस्ता मतदान भैसके पछिका मसिना कुराहरुलाई छुट्याएर गणना गर्नु पर्दा पक्कै पनि सजिलो छैन होला? तर तातै खाऊँजली मरुं जस्तो गर्ने जनता, मीडिया, पर्यवेक्षक र दर्शकहरुलाई मतगणना एउटा निरस खेल वासिनेमा जस्तो भैरहेको छ जो खत्तमहुने नामलिरहेको छैन ।
पञ्चमीको पाइला सारे जस्तो बिस्तारै पाइलाचालिरहेका मतगणना गर्ने गणकहरुले अहिले भएभरका सबै उखानलाई सम्झाइ रहेकाछन् । सामाजिक संजालमाउनीहरु प्रतितीव्र आक्रोश छ भने निर्वाचनआयोग प्रतिवितृष्णा । कसैले कसैलाई बुझाउन सकिरहेका छैनन् ।
अनियही मेसोमाधमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुको बाढी आएको छ । जुन मीडिया वाव्यक्तिजुनदल र नेताहरुसँग नजिक छन् तिनले प्राप्त गरेको थोरै मतलाई प िधेरै भन्ने, तिनलाई अगाडि राख्ने र आफुलाई मन नपरेकादल र नेताको मतलाई थोरै भन्ने र पछाडि राख्ने सम्मकापूर्वाग्रहितकामहरु भ्ैरहेका छन् । अझ त ठूलै पार्टीका ठूलै नेताहरुले आफ्नो दलकाकुनै उम्मेदवारले दुईवटा वडामा अग्रतालिदां मात्रै पनिजितिसकेको भनेर झ्याली पिट्ने सम्मकाकाम गरेकाछन् ।
सबैले आफ्नो नागोँपन देखाइरहेका छन् तर जनताभन्दादलकाकार्यकर्ता बढी भएको यो देशमा कसैले सर्वागँलाई कुरीकुरी भन्ने हिम्मतगर्न सकेका छैनन् ।
महाकुम्भको मेलामानागाबाबाहरु निर्वस्त्र नुहाए जस्तै निर्वाचनको महाकुम्भमा नेताहरुले देखाएको व्यवहार र गरेको क्रियाकलापले उनीहरुपनिमतदानको नदीमानिर्वस्त्रै देखिएका छन् । सबै नागैँ भएपछि कसैले कसैलाई देखेर मुख छोप्नु पनि परेन ।
सरकारले स्थानीयनिकायको गाविस र जिविस भगँ गरेर गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाबनाएपनिअझैसम्मओडारमा बस्या जस्ता देशकाजनतालाई नागरिक बनाउन सकेन । ती रैतीभए, प्रजाभए, जनतापनिभए तर देशको योग्यनागरिक भने हुन सकेनन् । त्यहीभएर त हजारौंमतबदर भएको छ ।
मतदातालाई उचितमतदाताशिक्षादिननसकेर निर्वाचनआयोग आफै निर्लज्जभएको छ । यदि देशकाजनता सबै नागरिक भएको भएतिनले आफ्नो अधिकार मात्रनखोजेर कर्तव्य पनिगर्न जानेको भए, तिनमाअलिकतापनि धैर्य भएको भएशायदमतपत्रमात्रै सदर हुन्थेन कि देशको मुहार पनिचहकिलो हुन्थ्यो होला?
नोटगने जस्तो सजिलो छैन भोट गन्न । नोट त धेरथोर गन्न सबैले जानेकाछन् तर भोट गन्न सबैले जानेकाहुंदैनन् । अनिनजानेको कामगर्न त बेर लागिहाल्छ नि । कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले घुष खाँदा कसैले भोट दिदैंनन् लुकाएर नोट नै दिन्छन् । अनित्यो लुकाएर दिएको नोट कसैले पनिगन्दैनन् । यताउति हेरेर खुसुक्कनोटगोजीमा हाल्छन् र बाटो लाग्छन् । अबत्यस्तो रहस्यमयकामगर्ने बानीलागेकाहरुलाई सबैको सामुन्ने भोट गन्नु पर्दा कम्तागार्हो भैराको होला? फेरि त्यसमाथिआफ्नो व्यक्तिगतझुकावभएको दल र नेतापनिचुनावमा उठेकाछन् र तीनको पनिमतगन्नु पर्ने भएपछि तिनले जितुन् भन्ने मनसायका साथबारम्बार भोट गन्दछन् । कँहीतीआफ्नो झुकावभएकादल र नेताहरुले हार्छन् किभन्ने मनमा ठूलो पीर र दबाव हुन्छ । त्यसैले चाहेजति समय खर्चेर भएपनि मतगणना गर्छन् ।
कथमकदांचिततीआफ्नो विशेष झुकावभएकादल र तीनका नेताले जितेमापाँचैवटा औंला घीउमा र टाउको कराहीमा उबडुब गरिरहेको हुनेछ । अनि त्यसपछि त त्यस्ता तुच्छ भोट भन्दा त कति धेरै नोटका मूठ्ठा भविष्यमा गिनेर बस्न वातिजोरीमा राख्नपाइन्छ ।
त्यसैले मतगणना जति ढिलो भयो त्यति राम्रो तीनदिनचले अढाइ कोस मात्र हैन कि ६ दिनचले सवाकोस गरे जस्तो गरेर मतगणना गरे पनि मतदाताबाट दर्शक, पाठक र ग्राहकभएकाहरुलाई प्रतीक्षागर्नुको कुनै विकल्प छैन । यस्तोबेला खरायो र कछुवाको कथा पढ्ने वामनमनै सम्झेर बस्ने मात्रहो ।